बामदेवका कारण विद्या ! - Jhilko
पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा निधन भए लगत्तै उनको निर्वाचन क्षेत्रमा उठ्ने उम्मेदवारको बारेमा अनेक अड्कलबाजी भइरहेको छ ।
लामो समयदेखिका आफ्ना निकट सहयोगी रवीन्द्र अधिकारीको अन्त्येष्टि कार्यक्रममा वामदेव गौतमको पोखराको उपस्थितिलाई लिएर उनी नै अधिकारीको निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनावमा उठ्ने चर्चा चलेको थियो । तर, गौतमले ट्वीट गर्दै यो कुराको खण्डन गरे । उनले खण्डनसँगै अधिकारीकै परिवारका सदस्यलाई सो क्षेत्रबाट सांसद बनाउन लविङ गर्ने कुरा पनि अगाडि सारे । गौतमले यो कुरा अगाडि सार्नासाथ अधिकारीको जीवन संगिनी विद्या भट्टराईको नाम एकाएक अगाडि आएको छ ।
यसले दुइटा कुरालाई एकैपटक प्रभाव पार्नेछ । पहिलो, गौतमलाई संसदमा ल्याउन नचाहने एकथरिका लागि उनैले दिएको यो हल कामयावी हुनेछ । दोस्रो, सरकारले अपेक्षाकृत जनताको पक्षमा काम गर्न नसकेको र सम्पूर्ण विपक्षीहरुको मोर्चाबन्दी हुँदा नेकपाका अरु उम्मेदवारलाई जित्न अप्ठ्यारो पनि पर्न सक्थ्यो । पार्टीभित्रैबाट अन्तरघात हुन सक्थ्यो । विद्या भट्टराई नै उठ्दा सहानुभूतिको मत आउने र जित्ने सम्भावना रहेको पोखरावासीबीचमा चर्चा चलेको छ ।
अनेरास्ववियुकी पूर्व केन्द्रीय नेता एवम् राजनैतिक पृष्ठभूमि भएको परिवारको सदस्य भएका कारण उनको नाम ल्याउन पनि सजिलो हुने नै भयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईकी वहिनी पनि हुन विद्या भट्टराई ।
उनलाई निर्वाचन उठाउने हो भने रवीन्द्र अधिकारीले समालेको मन्त्रालय तत्काल दिंदा हुने भन्ने बहस पनि चलेको छ । पार्टीभित्र पर्यटन मन्त्री हात पार्न खुट्टा उचाली रहेका मझौला नेताको कुदाकुद पनि साम्य हुने एकथरि पार्टीका नेताले बताउन थालेका छन् । विद्यालाई सोझै पर्यटनमन्त्री बनाएर पछि सांसद बनाएमा राम्रो हुने तिनीहरुको तर्क रहेको छ ।
रवीन्द्र अधिकारी वामदेव गौतमकै कोटाबाट सांसद र मन्त्री भएका र वामदेवले सार्वजनिक रुपमा नै परिवारका सदस्यलाई निर्वाचन उठाउने इच्छा जताएकाले उनले चाहेमा विद्या सांसद र मन्त्री दुवै भएमा अनौठो हुँदैन ।
टाइमको उत्कृष्ट सयमा पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री खान
टाइम पत्रिकाले छानेका एक सय उत्कृष्ट व्यक्तित्वहरूमध्ये राजनीति क्षेत्रका २६ जनामा...